Qadaafi waa la dilay - BBC Somali
Qadaafi waa la dilay
20 Oktoobar 2011
Image caption Maydkii Colonel Qadaafi
Ra'iisalwasaaraha Libya Mahamoud Jibril ayaa ku dhawaaqay in Mucammar Qadaafi uu dhintay. Afhayeenka Golaha ku meel gaarka ee Libya ayaa BBCda u sheegay in Qadaafi lagu dilay dagaal dhexmaray taageerayaashiisa iyo ciidamada ku meel gaarka markii Qadaafi la qabtay ka dib.
Askari soo qabtay Qadaafi ayaa sheegay inuu ku dhuumanayay godka biyaha qaada uuna Qadaafi waydiistay inuusan dilin.
Dowladda kumeel gaarka ayaa sheegtay in wiilka Qadaafi Motassim la dilay kadib markii la qabtay isagoo aabihiis la dhuumanaya.
Waxaa jira warar is qilaafsan oo sheegaya in la qabtay wiilka kale ee Qadaafi ee Saif al Islam, isagoo dhaawacan iyo warar sheegaya inaan la ogayn meel uu jiro.
Colonel Qadaafi waxaa uu ahaa nin isku kalsoon oo sida uu rabo u dhaqma.
Isla markii uu awoodda afganbi aan dhiig ku daadan kaga qabsaday Boqokii Idris, isagoo ahaa askari da'yar waxa uu iska fogeeyay Hantigoosadka iyo Shuucinimada.
Waxaa uu qaatay nidaam saddexaad sida uu markii danbe ku sheegay Islaam iyo Hantiwadaag isku jira, laakiin fikradiisaasi waxay qaadatay muddo in ay horuimar sameyso.
Tani waa sidii uu u arkayay hantiwadaagga, wareysigii ugu horeeyay ee uu bixiyo markii uu awoodda qabsaday 1969.
Tababrakiisa militeri Colonel Gadaafi waxa uu ka soo qaatay Britian, fikradihiisa siyaasadeed ee ugu horeeyayna waxay ka yimaadeen Hogaamiyihiin Masar ee qaranimada carbeed, Jamaal Cabdinaasir, laakiin sanadihii ugu horeeyay Mucamer Qadaafi, waxa uu sheegay inuu fikrado casri ah wato.
Libya waxa ay leedahay shidaalka keyda ee ugu badan Africa, hogaamiyaheeda cusub waxaa uu dakhligaasi ku isticmaalay isbedello gudaha iyo kacaano ka dhacay dibedda. Waxa uu marti geliyay xaruumo lagu tababaro, jabhado mucaarad ku ahaa dalalka galbeedka Afrika, oo ay ku jireen kuwa qabqablayaashii dagaala Liberia, marklii danbe a madaxweyne Charles Taylor, kooxo hubeysan oo Falastiin (PLO) IRISh ( IRA) iyo Abu Nidal ayaa lacag iyo hub ka helay.
Waxaa uu beeniyay eedeeyen uga timid Israel iyo reer galbeedka.
1980 waxay ahayd markii uu xumaaday xiriirkii Col Qadaafi iyo reer galbeedka Margaret Thatcher ayaa ahayad Raiisul Wassaarihii Britain, Ronmald Reagon waxaa uu ahaa Madaxaweynihi Mareykanka oo mar ugu yeeray inuu Qadaafi yahay eey waalan.
1984 haweeney booliiska Britian ahayd Yvonne Fletcher ayaa lagu toogtay banaanka hore ee safaaradda Libya oo uu ka jiray banaanbax looga soo horjeeda Gaddaafi.
Laba sano kadib Mareykanku waxay ku eedeeyeen Libya inay ku lug lahayd bamkii kalaab lagu caweeyo oo ku yaallay galbeedka Berlin, oo ay caan ku ahaayeen askarta Mareykanka, waxaana taasi jawaab u ahayd in Mareykanku cirka ka duqeeyo Tripoli.
dadka lagu dilay weerarkaasi waxaa ka mid ahaa gabar uu soo korsaday Qadaafi.
Kadibna 1988 waxaa dhacay bamkii diyaaradii PAN AM ee ku dul burburtay Scotland oo ay ku dhinteen 270, waxaa xigay diyaarad Faransiiska oo ku dulburtay galbeddka Afrika.
Dowladda reer galbeedka waxay ku eedeeyeen Gadafi waxaana xigay cunaqabateyn iyo cadaadis diblomaasi.
Gudaha dalka waxay reer Libya u dulqaateen xukunkiisii adkaa, waxaa uu saddex nuqul ka soo saaray buugiisii cagaaran.
Waxaa uu ka qeybgalay shirka carabta isaga oo ay dumar ilaalinayaan, markii uu isku dayay inuu dhiso carab mideysan oo isaga uu madax u yahay, waa suurtageli weysay, kadib waxa uu u leexday inuu sameeyo Afrika Midaysan, waxaa uu ku safri jiray baabuur badan, waxaana uu jeclaa inuu ku noolaado teendho.
Dhamaadkii 1990 waxaa uu bilaabay Qadaafi inuu ku soo laabto masraxa caalamka, waxa uu soo wareejiyay si maxkamad loo saaro dadkii loo heystay qaraxii lockerbi, 2003, waddamada reer galbeedka waxaa ay la yeesheen Libya wadahadalo qarsioodi ah, hogaamiyha Libya waxaa uu markaasi ka yaabiyay caalamka isaga oo xariga u jaray kooxihii mintidka ahaa, iyo inuu iska dhaafayo hubka qatarta ah.
Raiisul wasaarihii Britian, Tony Blair, ayaa Qadaafi uu ku soo dhaweeyay teendhadiisa, libyana waxay ku laabatay masraxa caalamka.
Dhawaan ayaa markii uu kacdoonkii carabta ay bilowdeen mar kale hogaamiyaha Libya wuxuu ka soo dhacay masraxii caalamka.
Qaraarkii qaramada Midoobay ee fasaxayay in la qaado tallaabo kasta oo suurtagal ah oo lagu badbaadinayo shacabka Libya ayaa Qadaafi waxaa uu beeniyay in dadkiisu ay isaga ka soo horjeedaan oo ay ku mudaaharaadayaan.
Si kastaba ha ahaatee waxaa soo gabagaboobay in ka badan afartan sano oo waddanka uu madax ka ahaa.